'अध्यक्ष सुनिश्चित भइसकेपछि कुनै गुटमा मरिमेटेर लाग्ने काम मबाट हुनेछैन'
निजी क्षेत्रको अग्रणी संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी साता नयाँ नेतृत्व चुन्दै छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको एक प्रमुख साझेदार निजी क्षेत्रले नयाँ नेतृत्व चुन्दै गर्दा उद्योगी व्यवसायी भित्र प्रवेश गरेको राजनीति र आन्तरिक शक्ति संघर्ष पनि उच्च विन्दुमा पुगेको छ । ‘अव्यवस्थित श्रम क्षेत्र र नियन्त्रणमुखी राज्य व्यवस्था‘ भन्दै दोषारोपण गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरु आफै भित्र पनि आलोचित छन् । पछिल्लो समय त कोभिडका कारण निजी क्षेत्र यति प्रभावित भएको छ कि कतिपय व्यवसायीहरु उठ्नै नसक्ने गरी थलिएका छन् । भनिन्छ, विषम परिस्थितिमा नै प्रभावशाली नेतृत्वको उदय हुन्छ र परीक्षा पनि । यही परीक्षामा होमिएका छन्, युवा उद्योगी चन्द्रप्रसाद ढकाल । महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार ढकालसँग ग्लोबल नेप्लिजकालागि नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनु भएको छ । रेस्पन्स कस्तो पाउनु भएको छ ?
मुलुक असाधारण स्थितिमा रहेका बेला निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ र यसका लागि निजी क्षेत्रमात्र नभई सिंगो मुलुकले लामो समयदेखि प्रतीक्षा पनि गरिरहेको छ । मंसिर ११, १२ र १३ गते (नोभेम्वर २६, २७ र २८) काठमाडौंमा महासंघको ५४औं साधारणसभा तथा निर्वाचन हुँदैछ र यसमा मैले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको छु । यस क्रममा कोभिडको त्रासदीकै बीचमा पनि हाम्रो टिम पछिल्लो पटक सुदूरपश्चिमको धनगढीदेखि पूर्वको धनकुटा (भेडेटार) सम्म पुगेर त्यस क्षेत्रका जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरु भेट्यौं, स्थानीय व्यवसायीसँग पनि छलफल ग-यौं । यसरी अभियान अगाडि बढाइरहँदा म एकदमै उत्साहित छु । जिल्लानगरका साथीहरुले दशकभन्दा लामो समयपछि हामीले खोजेजस्तै उम्मेदवार पायौं भनिरहनुभएको छ । वस्तुगत र एशोसिएटबाट पनि हामीलाई उस्तै राम्रो रेस्पोन्स छ । वस्तुगतका अधिकांश साथीहरु हाम्रै टिमबाट उम्मेदवार बन्न खोज्नुभए पनि कतिपय साथीहरुलाई टिममा राख्नसमेत सकेनौं र पनि उहाँहरुले उम्मेदवारी नदिएरै हामीलाई साथ दिइरहनुभएको छ । अर्को टिममा रहेका साथीहरु पनि प्राविधिक रुपमा मात्र अर्को समूहबाट उम्मेदवारी दिए पनि मन तपाइँहरुसँगै छ भनिरहनुभएको छ । एशोसिएटमा त मैले महासंघ आएदेखि नै सहभागी हुँदै आएको क्षेत्र रहेकाले यसमा पनि हाम्रो टिम एकदमै बलियो छ । यसरी महासंघको इतिहासमा भारी मतान्तरले विजयी हुने अवसर यसपटक हामीलाई मिल्ने अवस्था देखिन्छ ।
पूर्वपश्चिम दौडाहा सकेर काठमाडौं आउनु भयो । ग्राउण्ड कस्तो देख्नु भयो ?
हामीले पूर्व–पश्चिम भ्रमणपछि काठमाडौं फर्केर समीक्षा ग-यौं । यसरी हेर्दा हाम्रो पक्षमा करिब ८० प्रतिशत जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघहरु रहेको पायौं । निर्वाचनमा अर्को पक्षलाई कमजोर सोच्न त हुँदैन तर पनि यस वर्ष हाम्रो पक्षमा उहाँहरुको दृढ समर्थनले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ र देशैभरका व्यवसायीको आवाज मुखरित गर्ने महासंघ बनाउन अभिप्रेरित गरेको छ । जिल्लानगरका समस्या सुन्ने, सम्बोधनका लागि पहल गर्ने र जतिबेला पनि सहजै उपलब्ध हुने हाम्रो टिम हो र हाम्रो टिम राज्यको नीति निर्मातासम्म व्यवसायीका कुरा पु-याउन सक्षम रहेको जिल्लानगरका साथीहरुको बुझाइ रहेको पाएका छौं ।
तपाईंका कारणले पूर्व अध्यक्षहरु विभाजित भए भन्ने सुनिन्छ, खास कुरा के हो ?
निर्वाचनमा दुई पक्ष सहभागी भए पनि सबैले स्वतन्त्रतापूर्वक समर्थन गर्न पाउनुपर्छ र यो लोकतान्त्रिक संस्कारको म सदैव सम्मान पनि गर्दछु । महासंघलाई आजको स्थितिसम्म ल्याइपु-याउन र हामीजस्ता लाखौं व्यवसायीको आस्थाको धरोहर बनाइरहन निश्चय पनि हाम्रा पूर्व अध्यक्षहरुको योगदान छ । त्यसकारण उहाँहरुप्रति मेरो सम्मान छ र भोलिका दिनमा पनि नेपालको चेम्बर आन्दोलनका अग्रजका रुपमा उहाँहरुप्रति हाम्रो सम्मान नै रहेनछ । मलाई लाग्छ महासंघका सबै पूर्वअध्यक्षहरुलाई विगतको जस्तो पक्ष विपक्षमा नलागी एउटै धागोले जोड्नु हामी सबैको कर्तव्य हो र म त्यसमा निश्चय पनि सफल हुनेछु । उहाँहरुले खोजेजस्तै महासंघलाई निजी क्षेत्रको आवाज मुखरित गर्ने सर्वोच्च संस्थाका रुपमा स्थापित गर्न र आर्थिक विकासमा राज्यका निमित्त थिंक ट्यांकका रुपमा महासंघलाई निर्विकल्प संस्था बनाउने मेरो ध्येय र उहाँहरुको विचारबीच भिन्नता छैन ।
अध्यक्ष पनि तपाईंको पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने सुनिन्छ । के यो साँचो हो ?
महासंघका हालका अध्यक्ष भवानी राणा र आगामी अध्यक्ष अर्थात वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा दुवै महासंघमा मेरा अग्रज हुनुहुन्छ । उहाँहरु कानुनी रुपमा तटस्थ बस्नुपर्छ भन्ने कुनै वाध्यता छैन तर यसमा नैतिक प्रश्न भने जोडिएर आउँछ । विगतमा विधान संशोधन गरेर भवानीजीलाई निर्विरोध अध्यक्ष बनाइँदा होस् वा बीचमा धेरै साथीहरुको दबाबमा विधान संशोधन गरेर अध्यक्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नुपर्ने आवाज बलियो बनिरहँदा नै किन नहोस् मैले सहजीकरण गरेको उहाँहरुलाई प्रष्ट थाहा नै छ । यसको मूल्यांकन उहाँहरुबाट भएन भने पनि आम व्यवसायी साथीहरु जो मतदाता पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरुले अवश्य पनि गर्नु नै हुनेछ । म तपाइँलाई यही अन्तर्वार्तामार्फत प्रष्ट पार्न चाहन्छु कि अध्यक्ष सुनिश्चित भइसकेपछि कुनै गुटमा मरिमेटेर लाग्ने काम मबाट चाहिँ भोलिका दिनमा हुनेछैन । नेतृत्व तहमा पुग्नेले पदीय मर्यादा राख्नुपर्छ भन्ने पहिलो उदाहरण म नै हुने सौभाग्य पाउने भएकाले यसले मलाई झनै राम्रो पनि भएको छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष त अर्को कार्यकाल स्वतः अध्यक्ष हुन्छ । त्यसैले पनि बढी रस्साकस्सी भएको हो कि ?
चार वर्षअघि महासंघको विधान संशोधन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था मिलाइयो । त्यसअघि कार्यकारिणी समितिको पहिलो बैठकबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन हुने परम्परा अन्त्य गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था पनि गरियो । सिद्धान्ततः यो व्यवस्थाले महासंघमा धेरै गुटबन्दी नहोस्, वरिष्ठ उपाध्यक्षले अध्यक्षको सहयोगीका रुपमा तीन वर्ष काम गर्ने भएकाले नेतृत्व विकास पनि होस् भनेर नै गरिएको थियो । तर, हाम्रो पद्धतिभन्दा व्यवहारमै समस्या रहेछ भन्ने देखिएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षहरुले नेतृत्व विकास र तटस्थ भूमिकाभन्दा पनि गुटबन्दीमा आफूहरुलाई केन्द्रित गर्नुभयो । यसैले कतिपय अवस्थामा अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन नै गर्नुपर्छ कि भन्ने आवाज बलियो हुन थालेको छ । व्यक्तिको समस्याले विधिमै प्रश्न उठ्न थालेको पनि यस्तो देखियो । महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचनपछि स्वतः अध्यक्ष हुने भएकाले आफ्नो कार्यकाल कसरी सफल बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने भए पनि त्यो प्रवृत्ति नदेखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
टीम नै बनाएर चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ, अन्य पदका साथीहरुप्रति तपाईंको चासो कस्तो छ ?
हाम्रो टीम अनुभवी, उत्साही र कर्मशील व्यवसायीहरुको सन्तुलित प्याकेज हो । जिल्लानगर, वस्तुगत तथा एशोसिएट तीनवटै क्षेत्रमा सक्षम तथा अनुभवी उम्मेदवारहरु हुनुहुन्छ । महासंघमा हामीले गएर एक्लै गर्ने होइन र यसका लागि टीम चाहिन्छ । त्यो टिम सन्तुलित र समावेशी पनि हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रमा समावेशी भनेको व्यवसायको विधागत तथा भौगोलिक रुपमा क्षेत्रगत पनि हो । तपाईले हाम्रो टिमको धरातल हेर्नुभयो भने यसमा प्रष्ट तस्बिर देख्न सकिन्छ । हाम्रो टिमका तीनजना नै उपाध्यक्ष र सदस्यहरुको जितको स्पष्ट आधार देखिएको छ ।
तपाईंका चुनावी अजेण्डा के के हुन् ?
अहिलेको अवस्थामा मुख्य अजेण्डा भनेकै कोभिडबाट सिर्जित समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र अर्थतन्त्रलाई कसरी लयमा फर्काउने भन्ने हो । कोभिडका कारण साना, मझौला तथा ठूला सबैखाले उद्योग समस्यमा परेका छन् । रोजगारी सिर्जना गर्नु छ र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु छ । यसका लागि राज्यसँग मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । यतिमात्र नभई हाम्रो समूहले के गर्ने भन्ने विषय यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेका छौं । हामीले मूलतः 'एफएनसीसीआई भिजन २०२०' अन्तर्गत रहेर काम गर्नेछौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पुनर्संरचनादेखि महासंघलाई निजी क्षेत्रको थिंकट्यांकमा रुपान्तरण गर्ने र वास्तविक संघीय नेतृत्वदायी संगठन (एपेक्स बडी) निर्माण गर्ने योजना हाम्रो प्राथमिकतामा छन् । यस्तै, जिल्ला, नगर र प्रदेश महासंघको सबलीकरण, बलियो राज्य–निजी क्षेत्र साझेदारी, एमएसएमईका लागि संरचनागत व्यवस्था हाम्रा योजना र एजेण्डा हुन् । यतिमात्र हैन, हामी संकटमा परेका उद्योग–व्यवसायका लागि उद्धारको पहल गर्नेछौं भने लगानी आकर्षण, प्रोत्साहन र सहजीकरण तथा स्वच्छ व्यवसायको प्रवर्द्धन र सेवामा आधारित ज्ञान अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनमा पनि जोड दिनेछौं । औद्योगिक शान्ति र रोजगारदाता–श्रमिक सम्बन्धको सुढृदीकरण, निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विदेशी समकक्षीहरूसँग साझेदारी, आर्थिक कूटनीति विस्तार, गैरभन्सार अवरोध हटाउने, आर्थिक गणना र एकीकृत तथ्यांकमा केन्द्रित हुने, परियोजना धितोमा लगानीको नीतिगत व्यवस्थामा जोड दिने, कर विवादको निरुपणलगायत महासंघले गर्नुपर्ने धेरै काम हामी नेतृत्वमा पुगेपछि गर्नेछौं ।
के यी अजेण्डाले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सक्छ ?
निश्चय पनि सक्छ । हाम्रो देशमा समस्याको वास्तविक पहिचान तथा आसन्न समस्याको पूर्वानुमान अर्थात आकलन नै गर्न नसकिएको अवस्था छ । हामीले त्यसमा अब हिजोको गल्ती दोहो-याउने छैनौं । निर्वाचनपछि सम्पूर्ण निजी क्षेत्र एकढिक्का भएर समस्याको वास्तविक तस्बिर र सम्भावनाका आयाम प्रष्ट पारेपछि राज्यका जुन निकायले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, त्यो नगरी हुँदैन । हामीले राज्यलाई यस्तो सुविधा देउ, यति रोजगारी दिन्छौं र कर तिर्छौं भनेर कन्भिन्स गराउने हो । यसका लागि निजी क्षेत्रले प्रष्टसाथ आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ र निजी क्षेत्रका सबै संघ संस्थाको धारणा एउटै हुनुपर्छ ।
कोभिड-१९ का कारण उत्पन्न समस्याबाट पीडित उद्योगी तथा व्यवसायीलाई तपाईंको अभियानले सहयोग गर्ला ?
कोभिड-१९ बाट उत्पन्न समस्या हाम्रा लागि असामान्य भइसकेको छ । राज्यले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि ‘स्टिमुलस प्याकेज’ नल्याउँदा समस्या बढेका छन् भने अर्कोतिर राज्यले दिने भनेका पुनर्कर्जालगायत अन्य सुविधाका पनि कार्यान्वयनमा व्यावहारिक समस्या उत्तिकै छन् । बजेट र मौद्रिक नीतिपछिका समस्याका विषयमा त झन छलफलसमेत हुन सकेको छैन । यसैले यतिबेला हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान कोभिडबाट सिर्जित समस्यामा केन्द्रित हुनु जरुरी छ । हामी निजी क्षेत्र एकजुट भएर यो समस्या समाधान गर्न लाग्यौं भने समाधान असम्भव छैन ।
पीडित व्यवसायीलाई सरकारले सहयोग गरेन भन्ने तपाईंहरुको आवाज कहाँसम्म पुग्यो ?
हामी निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौं । निर्वाचनमा समेत हामीले यसैलाई अजेण्डाका रुपमा अगाडि बढाएका छौं । विगतमा पनि हाम्रा पहलमा केही उपलब्धि हासिल भएका छन् र भोलिका दिनमा अझ गम्भीर भएर यो समस्या उठाउने छौं ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा ठानिने निजी क्षेत्रको उन्नयनका लागि तपाईंले यस कार्यकालमा गरेका मुख्य मुख्य कामहरु के के हुन् ?
महासंघमा म निर्विरोध निर्वाचित उपाध्यक्ष हो । मैले महासंघमा गएपछि मूलतः रोजगारदाता परिषदको सभापतिका रुपमा रहेर श्रम समस्या समाधानमा योगदान गर्न सकेँ । लकडाउन अवधिको श्रमिकको पारिश्रमिक कति दिने भन्ने सम्बन्धमा सरकारको निर्णय एकातिर थियो भने व्यवसायीको दावी अर्कोतिर थियो । मैले यसमा निजी क्षेत्रका सबै संगठनहरुलाई विश्वासमा लिएर विभिन्न ट्रेड यूनियनहरुलाई पनि सहमत गराई समाधान गर्न सकेँ । यसअघि पनि न्यूनतम पारिश्रमिकलगायतका विषयमा मेरो भूमिका रह्यो । महासंघको साख र गरिमा उच्च बनाउन तथा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महासंघको गरिमामय उपस्थितिका लागि म सधैँ लागिरहेँ । साँच्चै भन्नुहुन्छ भने मैले आफ्नो व्यवसाय र निजी जीवनभन्दा दोब्बर बढी समय महासंघलाई नै दिएको छु ।
तपाईं नेतृत्वमा आइसकेपछि निजी क्षेत्रलाई एक ढिक्का बनाउने कुनै खास सूत्र छ ?
महासंघमात्र नभइ सिंगो निजी क्षेत्रलाई एकढिक्का बनाउनु आजको आवश्यकता हो । मैले विगतमा पनि अजेण्डाका आधारमा निजी क्षेत्रका अन्य संगठनहरु नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतसंग सहकार्य गर्दै आएको छु र भोलिका दिनमा यसलाई अझ फराकिलो बनाएर अगाडि बढ्नेछु । परिसंघ र चेम्बरले पनि व्यवसायीको समस्या बुझ्ने तथा सबैलाई मिलाएर लैजाने नेतृत्व आएमा त्यसमा साथ दिने भनिरहनुभएकाले हामी निजी क्षेत्रलाई एक बनाएर लैजान सफल हुनेछौं ।